Filtrer les éléments par date : mercredi, 01 juillet 2020
mercredi, 01 juillet 2020 22:07
Covid 19: « Testé positif aho » hoy i Pr Lalatiana
Nijoro vavolombelona i Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo na i Pr Lalatiana, araka ny ahafantaran’ny maro azy, fa mitondra tsimok’aretina Covid-19. Nanao fanambarana tamin’ny tambazotra sosialy facebook ity minisitry ny fahasalamana teo aloha ary mpandidy ao amin’ny HJRA Ampefiloha ity nilaza fa « Nanapa-kevitra aho ny hijoro vavolombelona amin’ny maha mpiasan’ny fahasalamana ny tenako, koa mampahafantatra antsika aho fa nanao ny test Covid-19 ka testé positif. Mijoro ho vavolombelona aho ankehitriny satria tao anatin'ny fanatanterahana ny asa maha mpitsabo ahy no nahazahoako ny tsimok’aretina, ary maro izahay mpitsabo mamonjy ain’olona no tratran’ny tsimok’aretina ankehitriny ».
mercredi, 01 juillet 2020 21:45
Dr Emmanuel Rakotovahiny: Nodimandry androany teo amin’ny faha 81 taonany
Nindaosin’ny fahafatesana ny hariva teo i Dr Emmanuel Rakotovahiny rehefa nolazoin’ny aretina fotoana lavalava ary notsaboina teny amin’ny klinika tsy miankina iray teny Ilafy teny.
mercredi, 01 juillet 2020 12:18
Covid-19: Miala an'Ankatso dia Ambohidempona
Enti-milaza ny olana misy iray nivoahana ka tafiditra olana hafa io ohabolana io.
Raha manomboka mamaha tsikelikely ny fihibohana ny any Eoropa ankehitriny, manomboka misokatra ny sidina eo amin'ny samy firenena eoropeanina, dia mipetraka ny fanontaniana hoe, oviana ny antsika Malagasy no hisokatra ny sidina mampitohy amin'ireo firenen-kafa.
Toa mihevitra isika fa rehefa misokatra ny any ivelany dia miverina toy ny teo aloha ihany ny fifandraisana, ka dia velomina ny fiaramanidina dia roso ny dia.
Azo antoka, fa aorian'ny Covid-19, toa ny zavatra nitranga taorian'ny 11 septambra tany Amerika, dia hiova ny fifandraisana eo amin'ny samy firenena.
mercredi, 01 juillet 2020 12:17
Ramamonjisoa Benjamin: Nodimandry androany teo amin’ny faha-80 taonany
Mpikambana teo anivon’ny antoko Tiako i Madagasikara i Ramamonjisoa Benjamin. Efa Senatera tamin’ny anaran’ny antoko izy ny taona 2003 - 2007. Voafidy ho Solombavam-bahoka TIM teny Antananarivo Atsimondrano ny taona 2007 - 2009, ary mpikambana CST ny taona 2011- 2013.
Nandritra ny fampielezan-kevitra ho filoham-pirenena frantsay ny taona 2017, izay noheveran'ny maro fa andresy ny kandidan'ny antoko ankavanana François Fillon, praiminisitra tamin'ny andron'ny Filoha Nicolas Sarkozy, dia nipoitra an-gazety, Canard enchaîné, ny raharaha Penelope, vadiny.
Voalaza tamin'izany fa assistante parlementaire n'ingahy depiote François Fillon ny vadiny Penelope Fillon ny taona 1998-2007 sy ny taona 2012, nefa tsy miasa momba izany akory izy, nefa mandray karama 500 000euro isan-taona, ary mpanolo-tsaina gazety mandray 100 000euro isan-taona. Raha ny kajy navoakan'ity gazety ity dia mitotaly 813 440euro ny vola noraisin'i Penelope Fillon, ary ny zanany 2 ihany koa dia nandray 84 000euro ny taona 2005 sy 2007, satria dia nisoratra ho assistants parlementaires andrainy avokoa fony izy senatera.
mercredi, 01 juillet 2020 09:22
Covid-19: Atao fanadihadiana ireo ministry ny fahasalamana teo aloha any Frantsa
Raha manomboka miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny any Frantsa, dia tonga kosa ny fotoana angataham-panazavana amin'ireo tompon'andraikim-panjakana momba ny fitantanana ny krizy Covid-19.
Voalohany nampanatsoan'ny kaomisionina parlemantera frantsay ny minisitra nametram-pialana nandritra ny krizy Covid-19 ny volana febroary lasa teo, ramatoa Agnès Buzyn.
Anisan'ny namaivay tamin'ny fanakianana azy ny tsy fahampian'ny takom-bava tany Frantsa.
Voalaza fa tokony nanana tahiry fiandry takom-bava 1 miliara isa la Frantsa hiatrehana indrindra ny mety fisian'ny valanaretina toy izao, nefa 100 tapitrisa isa monja no tahiry nisy.
mercredi, 01 juillet 2020 08:58
Covid-19: Tratra ihany koa ny Réa HJRA
Mitombo hatrany ireo service voakasiky ny Covid-19 ao amin'ny hopitaly CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Raha voatery nakatona mihitsy ny Toeram-pandidiana, dia tratra ihany koa ny Laboratoires, ary amin'izao dia misy mpiasan'ny toerana Vonjy aina famelomana, service Réanimation no tratra.
mercredi, 01 juillet 2020 08:44
Hopitaly Befelatanana: Feno ny toerana natao handraisana mararin'ny Covid-19
Nanao fampilazana ny eo anivon’ny Hopitaly Befelatanana fa feno ny toerana natao handraisana mararin'ny Covid-19. Misy ny fandaminana, araka ny filazana hatrany, fa « tsara aloha raha mba miantso ny laharana 034 14 015 30 (Triage Covid ) ireo izay hitondra marary ahiana mitondra ny soritr'aretina Covid-19 aty amin'ny Hopitaly Befelatanana , fa hisy ny Tompon'andraikitra ara-pahasalamana handray ny antso ary hanome torolalana ho antsika ».
mercredi, 01 juillet 2020 08:36
PHARMALAGASY: Hamokatra ny « gélules CVO+ » hatramin’ny 15 000 isa-minitra
Nitsidika ny fizotry ny asa fametrahana orinasa malagasy mpamokatra fanafody PHARMALAGASY teny Tanjombato Antananarivo ny talata 30 jona ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina mivady. « Efa mizotra ary hentitra sy manaraka ireo fepetra rehetra takiana ireo andrana sy fitiliana atao ankehitriny. Ary afaka iray volana eo ho eo dia ho vokarina hiadiana amin’ny Covid-19 ny « gélules CVO+», hoy i Andry Rajoelina. afaka hamokatra ny « gélules CVO+ » hatramin’ny 15 000 isa-minitra ity orinasa ity.
Ny fotodrafitrasa nisy ny OFAFA, izay orinasa malagasy mpamokatra fanafody, saingy niato rehefa nandalo fahasarotana ara-pitantanana, no ametrahana ny PHARMALAGASY.
Le Président de la République Andry Rajoelina et son épouse Mialy Rajoelina se sont rendus à Tanjombato ce 30 juin 2020 pour constater de visu l'avancement des travaux d'installation de l'usine pharmaceutique Pharmalagasy. Les travaux de construction de cette nouvelle usine ont débuté il y a un peu moins de deux mois. Pharmalagasy sera équipée de matériaux et technologies derniers cris.
«Notre défi est que Madagascar puisse produire localement les médicaments dont les Malagasy ont besoin» a déclaré le Président Andry Rajoelina durant cette visite. Par ailleurs, face à la pandémie du coronavirus, l’usine Pharmalagasy produira la gélule CVO+ curative et préventive.